Lasa mifankatia kokoa ny fianakaviana. Vao mainka mifankatia ny ray aman-dreny sy zanaka sy ny mpivady rehefa miara-mianatra Baiboly. Tokony hahafinaritra sy tsy ho andrin’ny rehetra ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Hevitra azo ampiharina sy mifanaraka amin’ny taonan’ny zanakareo àry fidina. Ohatra hoe lahatsoratra ao amin’ny Tilikambo Fiambenana na Mifohaza! na jw.org/mg. Resaho, ohatra, ny zavatra azon’ny zanakareo atao mba hiatrehany ny olana mahazo azy any am-pianarana. Mety hahafinaritra koa ny miara-mihira an’ireo hira hatao amin’ny fivoriana, ary misakafo kely aorian’izay.
Manokàna àry fotoana isan-kerinandro mba hiarahanareo mianatra momba an’i Jehovah. Hotahiny ianareo amin’izay ary lasa tia mianatra Baiboly.—Salamo 1:1-3.